Nissan TOYOTA MARKll HILUX HIACE PARDO BeLta Land cruiser အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
Nissan TOYOTA MARKll HILUX HIACE PARDO BeLta Land cruiser
Nissan...... terrano 2001 model... ဒီဇယ်....
3.0 cc..ခဲရောင်.... 2F **** ရန်ကုန်လိုင်စင်.....
TOYOTA. MARKll 2003 model 2.0cc....ခဲရောင်
TOYOTA HILUX. Vigo 2013 model. 4whee..
TOYOTA. HIACE 2008model 15ယောက်စီ ဒီဇယ် AuTO. Jpn အလုံး....
Mitsubishi. Pajero. 2002model... ဒီဇယ်..
Toyota. PARDO. 1997model 3.0cc ဒီဇယ်....
TZ grade. ခုံသုံးတန်း R. Aricom...
TOYOTA BeLta 2008model1.3cc ...
TOYOTA. HILUX. Suef 1998 model. 3.0cc
TOYOTA. Land cruiser. 1998model 2007ရုပ် ဒီဇယ် 4.2cc. အများကြီးမရေနိုင်တော့ဘူးဗျာ....
အလဲထပ့်လဲပေးမည်။ ကားကောင်းကားသန့်လေးတွေပါ စိတ်ဝင်စားရင်ဖုန်းနဲ့သာဆက်သွယ်ပေးကြပါနော် အဆင်ပြေအောင်ရောင်းချပေးမည်။........
Grade နဲ့ဈေးကိုမရေထားပါဘူး.... ဖုန်ဆက်သွယ်ပြီ အမှန်တကယ်ဝယ်မဲ့သူသာဆက်သွယ်ပေးကြပါနော် မဟုတ်ရင်ဖုန်းဘေလ်ကုန်နေလို့ပါ ဟီဟီ......
မေး ကြည့်ပြန်သွား ဈေးမေး .ဖုန်ဆက်..
အဲလိုမလုပ့်ဖို့ပြောကြည့်တာနော် စိတ်မဆိုးကြနဲ့အုံး...စိတ်ချမ်းသားအောင်ဟာသပြောတာပါ... အကိုအမတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်...မိတ်ဆွေအသစ်တိုးဖို့လိုအပ့်ပါသည်။... အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်... Thank. You.. very much. ဆသရ 09794171173 viber. 09794171172 ကိုဆက်သွယ်ပေးကြပါနော် တခြာကားတွေလဲရှိ့သေးတယ် TOYOTA. Alphard 2006ကနေ 2003 mzg. Mz အစားစား ပဲနော် ၇စီး
အမည်: Nissan TOYOTA MARKll HILUX HIACE PARDO BeLta Land cruiser